गर्मी मौसममा तपाईंको छालामा समस्या देखियो ? यी उपाय अपनाउनुहोस् | Hamro Doctor News
गर्मी मौसममा तपाईंको छालामा समस्या देखियो ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
गर्मी मौसममा मानिसलाई विभिन्न सवास्थ्य समस्या देखिने गर्छ । हुन त अहिले कोरोना महामारीका कारण प्रायः सबैजना घरमै बसिरहँदा बाहिरको धूलोधुवाँबाट र घामको किरणबाट जोगिनु भएको छ होला । तर, बाहिर काम विशेषले निस्कने र घरमै बसिरहेको बेला पनि छालामा समस्या निम्तिन सक्छ ।
गर्मीका कारण छालामा रातो डाबरहरु आउने, छाला चिलाउने, छाला रातो हुने जस्ता समस्याहरु देखिन सक्छ ।
टन्टलापुर घाम, चर्को गर्मी र धुलोधुँवाले हैरान नभएको को होला र ? जसले गर्दा गर्मी सुरु भएसँगै छालामा समस्या देखिने क्रम पनि बढेको छ । गर्मीले विशेषगरी अनुहारको छालालाई डढाउने र मेकअप बगाउने हुँदा महिलाहरुले घर बाहिर निस्कँदा छाताको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
तापक्रम बढ्दै जाँदा सूर्यबाट निस्कने पराबैजनी किरणले छालालाई असर गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै पसीना धेरै आउने र धुलो धुँवाका कारण पनि छालामा समस्या देखिने गर्छ । पसिना धेरै आउने र उपत्यकाको धुलो धुँवाले धेरैलाई छालामा समस्या हुने गरेको छ ।
गर्मी मौसममा छालामा विविध समस्या देखा पर्छ । चर्को गर्मी र धुलोधुँवाले छालामा हुने समस्याहरु निम्न छन् ः
Last modified on 2021-07-12 10:27:06